Nagu saabsan - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Nagu saabsan
Soo ogow waxa ay awooda bulshada kuu qaban karto.
Faa'iidada Medicare ee CHPW Ma dabooshay
Anaga oo ah bixiyaha qorshaha Advantage Medicare ee deegaankaaga, waxaa naga go'an inaan u adeegno bulshadayada Washington.
Community Health Plan ee Washington waxaa la aasaasay 1992 waxaana aasaasay Xarumaha Caafimaadka Bulshada ee Washington. Waxaan noqonay marka hore aan macaash doon ahayn qorshaha daryeelka la maareeyay oo ay aasaaseen Xarumaha Caafimaadka Bulshada ee gobolka.
Waxaan si dhow ula shaqeynaa bixiyeyaasha maxalliga ah si loo hubiyo in baahiyahaaga caafimaad la daboolay. Waxaan uga baxeynaa banaanka xarunta caafimaad kaa caawinaya inaad kaheshid ilaha bulshadaada.
Kula Kulmaya Meesha Aad Joogto
Shaqaalaha CHPW waxay u shaqeeyaan si adag maalin kasta si ay uga gudbaan ugana gudbaan u adeegida xubnaheena.
Maalmihii hore ee xirida COVID-19, waxaan la xiriirnay mid kasta oo kamid ah xubnaheena Medicare Advantage — labo jeer - si aan u hubino inay fiicnaayeen. Intii lagu jiray wicitaannadan midkood, xubin ayaa noo sheegtay in xariggeedii la xiray. Shaqaale ka tirsan CHPW ayaa ka caawiyay inay dib u rogto, sidaa darteed wax yar ayey dareemi laheyd keligaa kayar waqti cidlo ah.
kale xubin codsaday gacan ka geysashada sugidda cuntada, maadaama aysan ka adeegan karin dukaamada sababtoo ah COVID-19. Mid ka mid ah shaqaalaha caafimaadka bulshada ayaa ku xirtay iyada makhaayad maxalli ah oo la bixiyo qado lacag la'aan ah ilaa waayeelka.
Caafimaadkaagu wuu ka badan yahay ballamaha takhtarka iyo daawooyinka laguu qoray.
Our Maareynta Kiiska kooxda waxay ka caawisay xubin sidii ay u heli lahayd baahiyaheeda caafimaad ee ugu daran: baytariyaal cusub oo loogu talagalay cabbirka cadaadiska dhiiggeeda, glucometer shaqeeya, iyo taageero dhaqaale sida iyada kicins seddex ay ayeeyo u tahay.
Xubin kale ayaa naga dalbaday caawimaad markii korantadiisii ​​la damiyay. Khabiirkayaga guryaha, oo ay kala soo shaqeeyeen inuu u guuro xaalad nololeed ka wanaagsan, dhageystay jahwareerkiisa, loo yaqaan shirkadda korontada isaga, iyo wuxuu ku taageeray xubinta inuu naftiisa u doodo.
Waxaan halkaan u nimid inaan ku garab socono safarkaaga caafimaad—Dhammaan weecinta iyo leexleexasho.
CHPW waxaa la soo xiriirtay xaaska xubin ka tirsan xaalado badan oo dabadheeraad ah. Shaqaalaheenna iyada caawiyey si loo garto calaamadaha in ninkeeda loo baahan yahay daryeelka degdegga ah, laakiin isbitaal dhigistiisa kadib, lamaanaha ma helin caawimaadda sii-deynta kadib ee ay u baahnaayeen.
CHPW shaqaalaha dhex galay, ayaa maskax kale qaab kale ku abuurtay lammaanaha ayaa heli karay taageerada ay u baahnaayeen, oo aan ku idhi ha ka welwelin biil—Waxay horeyba ula kulmi lahaayeen inta jeebkooda jeebka ugu badan. CHPW waxay dabooli laheyd wax walba.
Maxay Tahay Sababta Loo Doorto Faa'iidada Medicare ee CHPW?
Maxaad noogu dooratay inaan nahay qorshahaaga bixiyaha doorashada? Soo ogow sida aan u sameyno Medicare si ka duwan sidii hore.
Himiladeenna: Si loo helo daryeel caafimaad oo la awoodi karo oo tayo sare leh dhammaan. Waxaan qorsheyneynaa qorshayaasheena anagoo maskaxda ku hayna baahidaada, waana kugu taageereynaa talaabo kasta oo aad qaado.
Qorshayaasheena: Qorshayaasheena Medicare Advantage waxay diirada saareysaa daaweynta qofka oo dhan. Waxaan ka dhigeynaa mid fudud xulashada qorshaha saxda ah ee Medicare adiga oo kaa caawinaya inaad fahamto faa'iidooyinka qorshe kasta iyo soo jeedinta ikhtiyaarka adiga kuu shaqeynaya.
Daryeelkayaga: Markaad xubin naga tahay, waxaad tahay shaqsi, waxaadna helaysaa daryeel shakhsi ahaaneed oo baahiyahaaga ah. Waxaan kugula kulanaynaa bulshadaada, adeeg bixiyeyaasha oo dareemaya inay qoys yihiin.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Julaay 7, 2021